Ihe i mere ma mmadụ chọọ ka gị na ya nwee mmekọahụ ga-abara gị uru ma ọ bụ ghọ gị ahịa n’ọdịnihu.
Chegodị banyere ihe atụ a: O ruola naanị ọnwa abụọ Heather na Mike kpawara, ma ọ dị Heather ka ò ruola ọtụtụ afọ. Ha na-eji ekwentị edegara ibe ha ozi ọtụtụ ugboro. Ha na-anọ ọtụtụ awa ma ha kwurịtawa okwu n’ekwentị. Otu onye kwuwa okwu, onye nke ọzọ na-amadị ihe ọ chọrọ ikwu. Ma, ihe Mike chọziri ugbu a abụghị naanị ikwurịta okwu.
N’ime ọnwa abụọ ahụ ha kparala, naanị ihe Mike na Heather na-eme bụ ijide ibe ha aka na isusutụ ibe ha ọnụ. Heather achọghị ka ọ gafee otú ahụ. Ma, ọ chọghị ihe ga-eme ka Mike hapụ ya. O nweghị onye ọzọ na-eme ya obi ụtọ, na-emekwa ya ka ọ̀ bụ àkwá ugo otú Mike si eme ya. Heather gwara onwe ya, sị: ‘Mụ na Mike hụrụ ibe anyị n’anya . . . ’
Ọ bụrụ na i toruola ka gị na nwoke kpawa, ya abụrụ na ị bụ Heather, gịnị ka ị ga-eme?
Mmekọahụ bụ onyinye Chineke nyere naanị ndị bụ́ di na nwunye. Mmadụ nwee mmekọahụ tupu ya alụọ di ma ọ bụ nwunye, ọ pụtara na o nweghị ihe o ji onyinye ahụ kpọrọ. Ọ ga-adị ka ebe mmadụ ji ọmarịcha uwe a zụtaara ya na-ehicha ụlọ
Mmadụ sí n’ebe dị́ ezigbo elu wụtuo, ọ ga-emerụ ahụ́. Otú ahụ ka ọ dị ma i nupụ isi n’iwu Chineke nke kwuru, sị: “Zere ịkwa iko.” —1 Ndị Tesalonaịka 4:3.
Olee nsogbu inupụrụ iwu ahụ isi na-akpata? Baịbụl kwuru, sị: “Onye na-akwa iko na-emehie megide ahụ́ nke ya.” (1 Ndị Kọrịnt 6:18) Olee otú o si bụrụ eziokwu?
A chọpụtala na ọtụtụ ndị na-eto eto nwerela mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ bụ nwunye na-emecha nwee otu n’ime nsogbu ndị a ma ọ bụ karịa.
OBI MGBAWA. Ọtụtụ ndị na-eto eto nwerela mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ bụ nwunye kwuru na ha mechara kwaa mmakwaara.
ATỤKWASỊGHỊ IBE HA OBI. Nwoke na nwaanyị nwee mmekọahụ mgbe ha na-alụbeghị, ihe onye ọ bụla n’ime ha ga na-eche bụ, ‘Ònye makwanụ onye ọzọ ya na ya nwerela mmekọahụ?’
ILEWE IBE HA ANYA ỌJỌỌ. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọtụtụ ụmụ agbọghọ chọrọ ka ụmụ okorobịa ha na ha na-akpa na-echebe ha, ọ bụghị imebi ha. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na-achọpụta na ụmụ agbọghọ ndị kwere ka ha na ha nwee mmekọahụ anaghịzi amasịcha ha.
Ihe kacha mkpa: I nwee mmekọahụ mgbe ị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, i reela ùgwù gị n’ihi na ị tụfuola ihe bara ezigbo uru i nwere. (Ndị Rom 1:24) Ahụ́ gị bara ezigbo uru. I kwesịghị ikwe ka e mebie ya.
Gosi na i kpebisiri ike irube isi n’iwu ahụ Chineke nyere ‘ka anyị zere ịkwa iko.’ (1 Ndị Tesalonaịka 4:3) I mechaa lụọ di ma ọ bụ nwunye, ị ga-enwezi ike inwe mmekọahụ. Obi ga-adị gị ezigbo ụtọ inwe ya mgbe ahụ n’ihi na ị gaghị na-echegbu onwe gị, na-akwa mmakwaara, ma ọ bụ nwee nsogbu ndị ọzọ ịkwa iko na-akpatakarị.—Ilu 7:22, 23; 1 Ndị Kọrịnt 7:3.
Onye hụrụ gị n’anya n’eziokwu ọ̀ ga-eme ihe ga-akpatara gị nsogbu ma ọ bụ ihe ga-eme ka obi na-ajọ gị njọ?
Onye na-echere gị echiche ọma n’eziokwu ọ̀ ga-eme ka i mee ihe ga-eme ka gị na Chineke ghara ịdị ná mma?—Ndị Hibru 13:4.
MAKA ỤMỤ AGBỌGHỌ
Ọtụtụ ụmụ okorobịa ekwuola na o nweghị ihe ga-eme ka ha lụọ nwa agbọghọ ha na ha nwetụrụla mmekọahụ. Maka gịnị? Ọ bụ maka na ha chọrọ ịlụ onye na-emebibeghị.
Ihe a ha kwuru ò juru gị anya ma ọ bụdị wee gị iwe? Cheta na fim na ihe ndị ọzọ a na-egosi na tiivi na-eme ka o yie ka mmadụ inwe mmekọahụ tupu ya alụọ di ma ọ bụ nwunye ọ̀ dị mma, bụrụkwa otú e si egosi ezigbo ịhụnanya.
Ma ekwela ka a ghọgbuo gị. Ndị na-achọ ịrata gị ka i nwee mmekọahụ na-achọ ime ihe na-agụ naanị ha.—1 Ndị Kọrịnt 13:4, 5.
MAKA ỤMỤ OKOROBỊA
Ọ bụrụ na gị na nwa agbọghọ na-akpa, jụọ onwe gị, sị, ‘M̀ hụrụ ya n’anya n’eziokwu?’ Ọ bụrụ na ị hụrụ ya n’anya, olee otú kacha mma i nwere ike isi gosi ya? Ihe ị ga-eme bụ ịkata obi na-edebe iwu Chineke, inwe amamihe nke ga-eme ka i zere ọnwụnwa, na ịhụnanya nke ga-eme ka ị na-eme ihe ga-abara onye ahụ uru.
I nwee àgwà ndị a, obi nwere ike ịdị nwa agbọghọ ahụ otú ọ dị nwa agbọghọ Shulem ahụ na-emebighị onwe ya, bụ́ onye kwuru, sị: “Onye m hụrụ n’anya bụ nke m, abụkwa m nke ya.” (Abụ Sọlọmọn 2:16) N’eziokwu, ọ ga-ahụkwu gị n’anya.
Mmadụ chọọ ịrata gị ka gị na ya nwee mmekọahụ ma sị gị, “Ọ bụrụ na ị hụrụ m n’anya, ị ga-ekwe,” gwa onye ahụ hoo haa, sị, “Ọ bụrụ na ị hụrụ m n’anya, ị gaghị asị m mee ya.”
Ihe i kwesịrị iburu n’obi mgbe gị na onye na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ nwaanyị ibe gị nọ bụ: Emela ihe ọ bụla ị na-achọghị ka papa gị na mama gị hụ.
Gịnị ka m ga-ekwu ma mmadụ gwa m ka mụ na ya nwee mmekọahụ?
Olee ihe ndị ga-eme ka o sikwuoro m ike ịsị mba?
Olee otú m ga-esi gbaara ihe ndị ahụ ọsọ?
mailto:?body=Gịnị Ka M Ga-eme ma Mmadụ Chọọ Ka Mụ na Ya Nwee Mmekọahụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102015827%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka M Ga-eme ma Mmadụ Chọọ Ka Mụ na Ya Nwee Mmekọahụ?
mailto:?body=Azịza Ajụjụ Iri Ndị Na-eto Eto Na-ajụ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dypq%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Azịza Ajụjụ Iri Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
Otú Ị Ga-esi Akọwara Mmadụ Ihe I Kweere Banyere Mmekọahụ